एक वर्षभित्र आउँदैछ नेपालमा रेल - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
एक वर्षभित्र आउँदैछ नेपालमा रेल
Published On : १ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १३:३८
विराटनगरमा रेल आउने हल्लासँगै धेरैको मनमा यस्ता प्रश्न खेल्न थालेका छन्। के साँच्चै आउँला रेल? कि यो हल्ला पनि सपनामै सीमित हुने हो? तर, एक वर्षभित्रै विराटनगरबासीले रेल कुदेको हेर्न पाउने भएका छन्।
प्रारम्भिक चरणमा मालबहाक रेल आउनेछ। नेपालतर्फको तीन किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा विवाद समाधान भएको छ। सन् २०१९ मार्चसम्ममा विराटनगरमा रेल ल्याउने गरी भारतीय निर्माण कम्पनी इर्कनले बथनाहा कटहरी रेल्वे परियोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। अहिले नेपालतर्फ धमाधम लिक बिछ्याउने काम भइरहेको छ। ३७३ करोड भारतीय रुपैयाँको लगानीमा बन्ने रेलमार्ग भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म १८.६ किलोमिटर रहेको छ।
निर्माण कम्पनीका मेनेजर डाइरेक्टर प्रदीप कुमारले आगामी अक्टोबरसम्म नेपालको सीमासम्ममा रेल आउने बताए। उनले भने, ‘नेपालमा जग्गाको समस्या समाधान भए आउँदो मार्चसम्ममा कटहरीसम्म रेल कुदेको तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुनेछ।’ उनका अनुसार नेपालमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी छेउमा भने आगामी अक्टोबरसम्म रेल आउनेछ। उक्त स्थानमा अहिले धमाधम रेल स्टेशन निर्माण भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार बथनाहादेखि एक दुई दिनपछि रेलको लिक बिछ्याउने काम सुरु हुँदैछ।
बीचको रेल्वे लाइन निर्माणको काम धमाधम भइरेको छ। गत मार्च मसान्तसम्ममा आयोजनाको रकममध्ये २१३ करोड रकम खर्च भइसकेको छ भने ६० करोड बराबरको काम कटहरी स्टेशनको जग्गा विवादले रोकिएको छ। जग्गा विवाद समाधान हुने बित्तिकै उक्त रकम खर्च गर्ने क्रम सुरु हुनेछ। भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेशनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटर जग्गामध्ये तीन किलोमिटर क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन।